यस उत्पादनको नाम - "जेलाटिन" - हामीलाई ल्याटिन भाषाबाट आएको थियो, अनुवादमा यसको मतलब "जमे भएका, जमेको छ।" सिद्धान्तमा, खानाको जेलाटिन प्राकृतिक बायोप्लिमिमर हो। लेबलहरूमा, यो खाना पूरक कोड ई 441 द्वारा नामित गरिएको छ।
हड्डी र टण्डन जनावरहरू प्रविधि, साथसाथै तराजू र माछाको हड्डी प्रसोधन गर्दा प्राकृतिक जिलेटिन खाना उत्पादन गरिन्छ। यस अतिरिक्त को रचना मा प्रोटीन, बोसो, स्टार्च, केहि प्रकार को विटामिन र अमीनो एसिड शामिल छ।
खास गरी बहुमूल्य तथ्य यो हो कि जेलाटिन भोजनमा ग्लिसिन हुन्छ, यो अमीनो एसिडलाई मानव शरीरले जीवन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। अन्य प्रोटीन उत्पादनहरुमा ग्लिसिन अनावश्यक छ, त्यसैले खाना पकाउने जिलेटिनको प्रयोग शरीरको लागि धेरै उपयोगी छ।
यसको अतिरिक्त, खाद्य जेलिन मा प्रोटीन को विशेष एसिड एसिड, विशेष रूप देखि, हाइड्रोक्सइप्रोलाइन र प्रोलाइन हुन्छ। त्यसकारण, जेलेटिनसँग व्यंजनहरू जोडाहरू र हड्डियों रोगहरू छन्, उदाहरणका लागि, ओस्टोकोन्ड्रोसिसहरूका लागि धेरै उपयोगी छन्। जिलेटिन, कपाल र छालाको अवस्था सुधार गर्न गेलिथन पनि फायदेमंद छ। यो उत्पादन न केवल एक खाद्य additive को रूपमा प्रयोग गरिन्छ , तर यसको पनि कस्मेटिक मुखौटा र नहाले पनि बनाउँछ।
तर जो लोग एलर्जी को प्रत्याशित हुन्छन्, साथै जो हृदय रोग प्रणाली मा विकृत हुन को लागी, जेलाatin संग व्यंजन को लगातार उपयोग देखि बचना चाहिए।
जिलेटिन व्यापक रूपमा खाद्य उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ। यो डिब्बाबंद खाना, जेली, साथै विभिन्न डेसर्टहरूको उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ। प्रायः, यो थपिणी घरको खानामा पनि प्रयोग गरिन्छ।
जेलाटिसको कुनै गन्ध र अलग स्वाद छैन, यो नाकबाट डेसर्टहरूबाट विभिन्न प्रकारका बर्तनहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। तर त्यो पाक अनुभव सफल भयो, केहि नियमहरू पालन गर्न आवश्यक छ। अनि तपाईंले जेलीटिन खाना समावेश गरेको खाद्य पदार्थको सफल तयारीको लागि जान्नु पर्ने पहिलो कुरा, यो पूरक कसरी बढ्दैछ।
Gelatine एक पाउडर वा पत्रपत्रिका रूपमा रिलीज गरिएको छ। प्रत्येक प्रकारका उत्पादनको लागि यसको आफ्नै सबटलेटहरू छन्। यदि पाउडर जेलाटिन प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि उबले गरिएको ठुलो पानीको साथ पाउडरको एक पाउडरको मात्रामा खानुपर्छ। जिलाatin सुँगुर को एक सम्पत्ति छ, मात्रा मा वृद्धि को लगभग6पटक। यो परिस्थिति पानीको आवश्यक मात्रा निर्धारण गर्न खातामा लिइयो। मिश्रणलाई लगभग 30-40 मिनेटसम्म स्वाइल गर्न अनुमति दिनुहोस्। अब तपाईलाई पानीको स्नान तयार गर्न आवश्यक छ, जहाँ सुँगुर जिलेटिनसँग बर्तन राखिएको हुन्छ, र मासुलाई तातो बनाउँदछ जबसम्म ढोका भत्किएको हुन्छ, कुनै पनि ठाउँमा उबलने अनुमति छैन। नतीजा समाधान तयार तैयार उत्पादनहरूमा थपिएको छ, मिश्रित राम्रो र भान्सा फ्रिजको लागि फ्रिजमा राखिएको छ। यो ध्यान दिइनेछ कि यदि तपाईले प्रति लीटर तरल 20 ग्राम लिटरिन लिनु हुन्छ भने जेली कमजोर हुनेछ, "थोरै।" एक चक्कु संग कटौती गर्न को लागि एक मजबूत जेली, तपाईं प्रति लीटर सिरप वा भाइरस को बारे मा 40-60 ग्राम जेलिन को आवश्यकता हो।
पाना जेलिन प्रयोग गर्दा, डिशको तयारी गर्ने प्रक्रिया छिटो चल्नेछ, किनकि प्लेटहरू केवल5मिनेटको लागि पानीमा पर्याप्त भिचाइन्छ। त्यसपछि प्रविधि समान छ: जिलेटिन पानीको पानीमा भंग भएको छ र डिशको आधारमा थपिएको छ।
यो ध्यान दिइन्छ कि जेलिन भोजन सहित, पाक विभागमा धेरै भाँडाहरू छन्। नाश्ता र डेसर्टहरूका लागि किचनहरू ठूलो संख्यामा पाक पत्रिकाहरू वा वेबसाईटहरूमा सम्बन्धित वेबसाइटहरूमा फेला पार्न सकिन्छ। यो विभिन्न प्रकारका जेल्सी, मोजी, जेलीज, क्रीम, मीठो र नाक डिनर र धेरै धेरै छन्।
ती कारणहरूका लागि जो कोही कारणहरू चाहँदैनन् वा पशु मूलको खाना खाएनन्, तपाईं जलाशयलाई उग्र-अगारमा बदल्न सक्नुहुनेछ। यो उत्पादनमा उत्कृष्ट हिज्जे गुणहरू छन् र समुद्री सतहमा प्रशोधन गर्दा उत्पादन गरिन्छ।
कसरी चिकन खुट्टा पकाउने?
काला सागर सर्गन: कसरी बनाउने?
'विदेशी' तरकारी - बन्दागोभी romanesco, र यो तयार गर्न कसरी
तिनीहरूले के बस्थे Pushkin रूप जीवन?
पहिलो grader लागि झोला कसरी चयन गर्न
एस्ट्राडा: कि अवधि को सामान्य अर्थमा के?
सस संग पोर्क को एक स्वादिष्ट स्ट्यु: नुस्खा
कहानी क्लार्क: बीउ देखि बढ्दै
पूर्व-Viagra, Sergey Lazarev अथवा dima Bilan Eurovision ल्याउनेछ? Exhibitors सूची